Raha tena tia anao izy dia tsy hanan-danja be aminy izany maha-virjiny na tsia izany. Rehefa hitany ianao fa vehivavy manana ny hasinao sy mendrika ny fitiavany dia tsy hametraka olana izy. Matoa izany manahirana azy dia tsy ampy ny fatran’ny fitiavany anao. Fadio kosa anefa ny mandainga aminy, fa raha manontany anao izy dia aleo mitsotra ny marina. Tsy maharitra ny fitiavana miorina eo ambony lainga, satria amin’ny fotoana hahatrarany ny marina dia tsy hatoky anao intsony izy.
Misy lehilahy izay, mahafinaritra ahy efa elabe. Midobodoboka be foana ny foko isaky ny mahita azy. Tiako ve izy izany sa fitsiriritana fotsiny ?
Manandrama mieritreritra io olona io, alefaso any aminy fotsiny ny sainao dia nofinofiso izay tianao atao miaraka aminy. Mieritreritra fiarahana lavabe, mariazy, zanaka, trano iombonana… ve ianao ? Raha izany no izy dia tena latsa-pitia tanteraka aminy ianao. Mieritreritra oroka sy safosafo ary firaisana ara-nofo ve ianao ? Raha izany fotsiny dia fitsisriritana sy filàna ilay izy, fa raha toa kosa ka miaraka amin’ilay fitiavana be sy ho avy mahafinaritra izany, dia tena latsa-pitia lalina marina ianao.
Lehilahy 42 taona aho, manambady ary manan-janaka 2. Efa in-droa no nisaraka tamiko ilay vadiko, fa niverina ho azy ihany ary noraisiko noho ireo zaza. Ny tena olana dia tereny hanome vola ny rafozako aho, ka izay no mampiady lava anay. Amin’izao, mifankatia amina vehivavy iray aho ary efa matetika mody any. Tsy miray ara-nofo intsony koa izaho sy ny vadiko. Mety ve izany ataoko izany, satria ny zanako no tsinjoviko, ka izay no tsy isarahako amin’ilay vadiko ?
Tsy hahalasa anao lavitra ny fizarazarana amin’olon-droa toy izao fa tsy maintsy mila manao safidy ianao. Hevero fotsiny fa raha toa ka te haka vady ilay olon-tianao ianao dia tsy ho afaka ny hanao izany mihitsy. Anao ihany anefa ny safidy satria ianao no mahalala ny fomba fifandraisanao amin’ny tsirairay amin’izy roa vavy. Raha toa ka heverinao fa afaka mifanaraka tsara ianareo telo, amin’izao fomba iainanareo izao dia angamba tsy hisy loatra ny olana. Saingy tsy maintsy hihalehibe ilay zaza ary hahafantatra ny zava-misy. Ho sarotsarotra ny hanazava aminy fa fiarahamonina fotsiny ny anao sy ny reniny, fa ny fitiavanao dia any an-kafa. Etsy an-daniny, tsy azo itadiavam-bahaolana mihitsy ve ilay olanareo ? Tadidio foana fa mila mitady marimaritra iraisana ny mpivady rehefa misy ny olana, izany hoe : mifandefitra. Raha toa ohatra ka mangataka aminao ny vadinao mba hanome 10.000 Ar isam-bolana ireo rafozanao, dia mety mba afaka manme 5.000 Ar isaky ny roa volana ianao. Adidinareo mivady rahateo ny manao valim-babena ho an’ny ray aman-dreny, na ny an’ny an-daniny na ny an’ny an-kilany.